तपाईंको मोबाइलमा टेलिकमको फोरजी चल्छ कि चल्दैन ? यसरी पत्ता लगाउनुहोस् « Tech News Nepal
तपाईंको मोबाइलमा टेलिकमको फोरजी चल्छ कि चल्दैन ? यसरी पत्ता लगाउनुहोस्
काठमाडौं । नेपाल टेलिकमले १८०० मेगाहर्ज र ८०० मेगाहर्ज ब्याण्डको फ्रिक्वेन्सीमार्फत देशभर फोरजी सेवा विस्तार गरिरहेको छ । दुई भिन्न ब्याण्डमा रहेर फोरजी सेवा सञ्चालन गर्नुको कारण धेरै स्थानमा गुणस्तरिय फोरजी सेवा उपलब्ध गराउनु रहेकाे कम्पनीले जनाएकाे छ ।
यसरी टेलिकमले दुई फरक ब्याण्डमार्फत देशभर फोरजी सेवा विस्तार गरिरहेको भएतापनि उक्त फोरजी सेवा तपाईंको मोबाइलमा चल्छ, चल्दैन भन्ने विषय तपाईंको मोबाइलमा निर्भर रहन्छ ।
किनभने यदि तपाईंको मोबाइलले यी दुईमध्ये कुनै पनि ब्याण्डलाई सर्पोट गर्दैन भने तपाईंको मोबाइलमा टेलिकमको फोरजी चल्दैन । तर, यदि यी दुईमध्ये कुनै एक ब्याण्ड तपाईंको मोबाइलले सपोर्ट गर्छ भने जुन ब्याण्ड सपोर्ट गर्छ, सोही ब्याण्डमा तपाईंले फोरजी चलाउन सक्नुहुनेछ ।
त्यसैले तपाईंको मोबाइलले कुन ब्याण्ड सपोर्ट गर्छ वा गर्दैन भन्ने विषय महत्वपूर्ण हुन्छ । यो विषयमा तपाईंले मोबाइल किन्दा नै मोबाइलका बक्सको बाहिर दिइएको जानकारीमा पनि यो विषय उल्लेख गरिएको हुन्छ ।
पछिल्लो सयमा बजारमा भित्रिएका धेरैजसो मोबाइल सेटले त दुवै ब्याण्ड सपोर्ट गर्छन् । तर, त्यसमा पनि कतिपय मोबाइल सेटले कुनै एकमात्र ब्याण्डमात्र पनि सपोर्ट गर्नसक्ने हुन्छ । भने, कुनैले गर्दै नगर्ने पनि हुनसक्छ ।
त्यसैले यहाँ हामी तपाईंलाई नेपाल टेलिकमकै साइटबाट आफ्नो मोबाइलले फोरजी सपोर्ट गर्छ, गर्दैन भन्ने विषयमा जानकारी दिँदैछौं । तर, त्यसका लागि सबैभन्दा महत्वपूर्ण विषय तपाईंको मोबाइलको आईएमईआई नम्बर भने आवश्यक पर्छ ।
मोबाइलको आईएमईआई नम्बर तपाईंले मोबाइलको बक्समा अथवा मोबाइलको पछाडि भागमा अथवा ब्याट्रीमा पनि टाँसिएको हुनसक्छ । यदि यी तीनै विकल्प भएन भने पनि तपाईंले आफ्नो मोबाइलको आईएमईआई नम्बर भने हेर्न सक्नुहुनेछ ।
त्यसका लागि तपाईंले फोनमा *#06# डायल गर्नुहोस् । यसपछि तपाईंले त्यहाँ तपाईंको मोबाइलको आईएमईआई नम्बर देख्नुहुनेछ । अब मोबाइलमा फोरजी ब्याण्ड चल्छ/चल्दैन भनेर जाँच गर्नुहोस् । त्यसका लागि सुरुमा यहाँ क्लिक गर्नुहोस् ।
यहाँ क्लिक गर्दा तपाईं सोझै उक्त परीक्षण पेजमा पुग्नुहुनेछ । त्यहाँ तपाईंले एउटा सर्च बार देख्नु हुनेछ । त्यसको तल सर्च भन्ने अप्सन रहेको छ । सुरुमा उक्त सर्च बारमा अब तपाईंको मोबाइलको आईएमईआई नम्बरको पहिलो ८ अंक हाल्नुहोस् ।
आईएमईआई नम्बरको पहिलो ८ अंक हाली अब तल रहेको सर्च बटनमा क्लिक गर्नुहोस् । त्यति क्लिक गरेसँगै त्यहाँ तल तपाईंको मोबाइलले १८०० मेगाहर्ज र ८०० मेगाहर्ज ब्याण्डको फ्रिक्वेन्सी सर्पोट गर्छ/गर्दैन भन्ने जानकारी आउनेछ । अथवा त्यसमध्य कुन सपोर्ट गर्छ भन्ने पनि जानकारी दिनेछ ।
अझ केही तल जानुभएको खण्डमा त्यहाँ तपाईंले आफ्नो मोबाइलले कुन ब्याण्डको फ्रिक्वेन्सी सपोर्ट गर्ने रहेछ भन्ने जानकारी समेत प्राप्त गर्नुहुनेछ ।
ल्यापटप किन्दै हुनुहुन्छ ? ख्याल राख्नुहोस् यी कुरा
काठमाडौं । नयाँ ल्यापटप लिँदा धेरैलाई कुन र कस्ताे लिने भन्ने कुरा तय गर्न निकै
टाइप नगरी यसरी उतार्नुहोस् फोटो, प्रिन्ट वा पीडीएफका अक्षर
काठमाडौं । पुस्तक, पत्रपत्रिका, तस्वीरको रुपमा रहेको स्क्यान कपी, जेपीजी फाइल, पीडीएफ वा अन्य वस्तु
एन्ड्रोइड फोनका लागि यस्ता छन् उपयुक्त निःशुल्क एन्टीभाइरस एप
काठमाडौं । मोबाइलमा एन्टीभाइरस कति आवश्यक हो भन्ने कुरा सधैंको चर्चाको विषय हो । तर,